बिर हस्पिटलमा बबाल छोरि र सालीको नयाँ खुलाशा , हत्या कि मृत्यु ? सत्य तथ्य भिडियो बाहिरियो…..(भिडियो साहित) «
Published : 23 September, 2020 9:11 am
यस विषयमा अस्पतालले अझैसम्म केही भनेको छैन् । यो किन भयो ? विरामीका आफन्तले भिडिओमा भने अनुसार नै भएको हो भने कोरोनाको फ्रन्टलाइनमा रहेर काम गर्ने चिकित्सकले किन यसो गरे ? सर्वत्र प्रश्न सार्वजनिक भएको छ ।